Agoonkii hooyadii illaaway, Q6AAD W/Q; C/fitaax Maxamed Xaambe | Laashin iyo Hal-abuur
Agoonkii hooyadii illaaway, Q6AAD W/Q; C/fitaax Maxamed Xaambe
Agoonkii Hooyadi Illaaway Q6AAD.
Odawaa waxaa loo gudbiyey goobta “Xero” la geeyo dadka soogalootiga ah ee aan waliba ku soo galin dalka nidaam ogolaasho, si ay u dalbadaan codsi qaxootinimo.
Odawaa oo safar iyo Socdaal dheer oo dhib badnaa soo maray ayaa markii la geeyey qolkii iyo gogoshii loo asteeyey inuu si ku meel gaar ah ugu sii Madbeeyo/hakado ayuu hurdo la dhacay waxayna ku qaadatey ku dhawaad 24 saac inuu soo tooso.
Odawaa waxaa lagu war-galiyey inuu u diyaar garoobo wareysi iyo xaduur la weydiinayo waxyaabo badan oo ku saabsan noloshiisa tii hore iyo tan keentay inuu dalkan magangalyo weydiisto, waana habka iyo hannaanka u degsan inta badan dalalka Adduunka, si loo ogaado inuu u qalmo qof qaxooti ah, loona eego codsigiisa daganaasho ee uu Holland u gudbistay.
Maaha arrin fudud in laguu aqoonsado qaxooti ama maganyalo doon dhab ah, waxaana ka sokeeya dhowr wareysi iyo caddeymo looga baahanyahay inuu keeno qofka codsanaya deganaanta iyo ogolaanshiiyaha dalalka bixiya magangelyada. Odawaa asagu ogaal sidaa u buuran kama uusan haysan arrimaha la xariira codsiga qaxoontiga iyo magangelyada iyo dhibka laga maro arrinkaas, si loo helo ogolaanshiiyo, werwerka iyo walaahoowga, diidmada iyo digashada taalle, eek u xeeran dadyowga ka soo hangagaarey dhulkoodii, waxaasa maankiisa ka guuxayey in haddii uu mar cagaha dhigo ciidda reer Galbeedka wax walba madaxiisa iyo majahiisa yihiin. Maaha fikrad u gooniya asaga hase yeeshee in badan oo naga mid ah ayaa rumeysnaa haddana rumeysan oo malahdoodu yahay.Horaa loo yiri;“Alloow qof aan wax ogeyn ha caadaabin”.
Weydiimo iyo wareysiyo badan ka dib, markii lala yeeshay ayaa lagu yiri; “ Naga war sug, go’aankii aan kaa gaarno waan kula soo socodsii doonnaa”. Odawaa dharaar walba wuxuu dhowr mar soo eegi jirey halka waraaquhu kuu dhacaan, jaqaf walba oo dhagahiisu maqlaanna wuxuu moodi jirey xaashi xog xambaarsan kana socota Laamaha sharci bixinta ee uu wacaalka ka sugayey. Sidoo kalana qofkii soo bidhaama oo dhaayihiisu qabtaan ee dhogor cad wuxuu u malayn jirey in uu dhambaaal u wado.
Abyan xaaladda wiilkeeda Odawaa waxay ula socotaa si wanaagsan, waxayna habeen iyo dharaarba afka ku haysaa duco iyo Alla bari. Kama daasho ku noqnoqoshada culimada diinta, waxayna ka dalbataa in shar iyo Sheydaanba looga quraama akhriyo wiilkeeda.
Odawaa inkastoo hooyadii kala fogaadeen, haddana wuxuu rajo ka qabaa in ay mar uun dib u midoobi doonaan, wuxuuna u sheegaa mar walba oo ay wada hadlaan in uu soo dhoofi doono haddii uu sharciga helo, xaqna uu dalkuu joogo ugu yeelan doono in hooyadi loo keeno. Ballamo badan oo oofintooda looga fadhiyo ayuu horey u galay, sida inuu XAJKA gayn doono hooyadi iyo ninkii abtiga ugu aadanaa ee Hanad oo asagu magaalada ku soo dhaweeyey berigii ay miyiga ka soo galeen ahna ninkii siiyey boos/dhulkii loo iibiyey Odawaa ee uu ku soo dhoofay.
Odawaa oo Muddo sugayey war celin kaga timaada laanta socdaalka ee dalka Holland ayaa maalin Isniin ah u dhaqaaqey bal in uu dhugto Sanduuqa waraaquhu ku soo dhacaan. Markuu gacanta galiyey wuxuu daf soo yiri waraaq ku dhigan afka dalka looga hadlo, wuu furey laakin waxba kama uusan fahmin fariinta ay xambaarsantahay. Durbadiiba wuxuu la beegsadey guriga mid ka mid ah asxaabtiisa oo dalka uga soo horeeyey. Markii uu saaxiibkiis dul maray dulucdii dhambaalka ayuu si murugo leh ugu sheegay in loo diidey sharcigii, laakin uu racfaan ka qaadan karo, wuxuuna ugu beer qaboojiyey in aysan diidmada koowaad dhib lahayn ayna tahay wax badanaa lala kulmo, welina uu fursad wanaagsan leeyahay. Wuxuuna ku yiri “ Saaxiib ha niyad jabin, waad guulaysa doontaa marka xiga”.
Odawaa la yaab ayey la noqotey diidmada loo soo tuurey, werwer iyo walaac horleh ayaa ku soo kordhey. Wuxuu xariir la sameeyey hooyadi Abyan una sheegay arrinta soo cusboonaatey. Waloow Abyan ay aad welweshay markii wiilkeedu u sheegay wixii dhacay, warkii waxay ku soo koobtey kulana dardaarantay Odawaa “ Wiilkeygiyoow, Weyne wehesho wax walba asaga ayaa awoodee”.
Odawaa wuxuu guda galay inuu racfaaan qaato, markale ayuuna dib u xareeyey codsi la xariira in la qaabilo loona aqoonsado qaxooti, wuxuuna ku doodey in uu mudanyahay in la caawiyo maadaama dalkiisii uu naftiisa kala soo cararay. Wuxuu gacan ka helay qaar ka mid qolooyinka u dooda xuquuqda soo galootiga waxayna u qabteen garyaqaan. Maxkamad ayuu maray Odawaa oo garab ka helaya garyaqaankii loo qabtey. Dood iyo fadhiyo badan ka dib waxaa loo ogolaadey daganaashihii Odawaa.
Abyan iyo wiilkeeda waxaa u soo iftiimey yididiilo waxayna si wada jir ah qalbiyada ugu aabuurnaa hiloow aan la soo koobi karin.Odawaa waxaa aqal uu ku noolaado laga siiyey mid ka mid ah magaalooyinka dalka ugu waaweyn, waxaana fursad loo siiyey in uu waxbarto shaqeystana haddii uu doono. Maadaama Odawaa uu ahaa wiil da’ yar wuxuu si sahlan ula qabsadey afkii iyo dhaqankii wuxuuna la xirtey dhalin yaro da’diisa ah oo isugu jirey kuwa dalka u dhashay asal ahaan iyo kuwa waaliddiintood soo galoon oo lagu dhalay carriga Holland.
Maah-maaah ayaa ahayd; “ Dad kaa badan iyo biyo kaa badanba waa ku qaadaan”. Odawaa waa la duufsadey, waxaana loo dhigey duruus aan ahayn kuwii lagu soo barbaarshey ee wanaagsanaa. Waxa uu faraha la galay camallo sheydaan, wuxuuna billaabey balwado xun oo laga taaban Mukhaaddaraadka. Waxaa yaraadey xariirkii badnaa ee uu la samayn jirey hooyadi, markii ay la soo hadashana malaha baarrinimadii ay ku taqaaney iyo hadal macaanidii toona.
Abyan waa dareentay in wiilkeedii wax iska baddaleen, laakin kama aysan daalin in ay ducada badiso si uu mar uun xeyndaabka wanaagga ugu soo laabto. Maalinba, maalinka ka dambeysa Odawaa waa sii fogaanayey waxaana gebi aahanba go’ay Xariirkii ka dhaxeeyey, wuxuu badashay dhammaan meelihii ay ka soo wici jirtey, in uu asagu raadshana warkeedaba daa.
Abyan Waxay diiradda saari jirtey sidii ay mar uun warkiisa u maqli lahayd. Dad badan ayey fariimo ugu soo dhiibtey, laakin Odawaa dhag jalaq uma siiyo. Waa beer wax dhalee dadka ayey ka xuuraansataa xaalka wiilkeeda, waana loo sheega hadba siduu ku suganyahay. Dad horaa yiri “ Laba kala baridey kala war la”. Asna wuxuu hadba dhinac u roorsanayaa balwad iyo baacsi haween, hooyadina waxay besteed u tahay oo la balanbashay una basaastey muuqiisa iyo maqalkiisa.
Maanso uu Abwaan Hadraawi ka sameeyey dhacdo tan la mid ahayd ayaan u soo xushey sheekadaan. Waxaadba moodaa in maasadaan ay ka soo burqatey Abyan.
Hayaanka fogaaday baa leh.
Harraad iyo waa kalkiise.
Hiloowga naftaa aloosan
Kashaa hinqanaysa goorba’an
Tolow hebel mee ku foogan.
Hangool li’idaan ku daayey
Intaan hebla’ kuugu faanay
Sidaad ku heshaa da’ weyne
Abyan utuntii iyo uur ku taaladii ay ka qaaday aanfada la soo daristey wiilkeeda ayaa xanuuno ku reebay, waxaana u sii dheeraa dhaqaalo xumo iyo dheef yari, waxay noqotey dhul yaal, waxaa la dhigey Isbitaal, miirkeedu ash maaha. Geeridii iyo goortii ay teedu ku ekayd ayaa la gaaray, waana geeriyootey. Waxaa xabaalaha la geeyey ayada oo aysan joogin xigto ama xigaalo dhanka ciidda ku dhigta. Waxaana asturey dariskii oo goostey in ay waajibka iska ridaan.
Dhowr gu’ ka dib markii ay go’dey Abyan ayaa waxaa la kulmey Odawaa nin aydaris ku ahaan jireen dalkii hooyo kana war helay dhiilada iyo dhimashadeedii, wuxuuna dhagaha Odawaa ku dhibciyey in hooyadii galbatey.
W/Q C/fitaax Maxamed Xaambe